Andro: 8 Oktobra 2019
Misy fijanonan-dàlana hanamboarana ny lalana amin'ny Salim Dervişoğlu Street, izay safidy hafa amin'ny lalambe D-100, izay ampiasana ny fitateram-bahoaka mankany amin'ny distrikan'i Kocaeli's Karamürsel, Gölcük ary Başiskele. Mpandeha fitateram-bahoaka [More ...]
Ny ben'ny tanàna ao Ankara Mansur Yavaş, izay mihaino ny feon'ireo mpianatra ary mihaino ny fitakian'izy ireo dia mbola manapa-kevitra mankasitraka ny mpianatra. Miaraka amin'ny teny filamatra ho anao: geçiren renivohitra, izay nanatanteraka ny serivisy izay nanampy tamin'ny toekaren'ireo mpianatra tany amin'ny faritra maro nanomboka ny volavolan-dalàna mankany amin'ny fitaterana. [More ...]
Avy amin'ny atrikasa "System Rail" nomanin'ny vondrona IMM dia nanapa-kevitra ny hanafainganana ny fampiasam-bola metro sy hifantoka amin'ny teknolojia an-trano. Nanangana atrikasa System Rail System ıyla ny sampan-draharahan'ny Railovy any Istanbul (IMM) izay nanangana ny akademia avy amin'ny oniversite isan-karazany. Lahateny fanokafana ny atrikasa [More ...]
Tao anatin'ny sehatry ny tetik'asa andraikitry ny fiaraha-monina nokarakarain'ny Eskişehir Munich Metropolitan sy ny sekoly Özel Çağdaş, ny mpianatra 42 dia namaky boky tamin'ny taratasy mivalona hoe ny teny filamatra 'Ny hetsika dia hetsika maoderina'. Mba hanomezana olona ny fahazarana mamaky boky amin'ny fitateram-bahoaka. [More ...]
Ny ben'ny tanàna ao amin'ny Antalya Metropolitan munisipalista Muhittin Böcek, Antalya, nanao drafitra, fitsipika, ny maha-izy azy dia mitohy miaraka amin'ny tanjona hanangana tanàna. Amin'izany toe-javatra izany, ny asa dia nanomboka tamin'ny fanarenana ny drafitr'asa fitaterana efa misy mba handrakofana ny distrika 19 manontolo. Ben'ny tanànan'ny kaominina Metropolitan [More ...]
Raha ny marina, sürpriz Tsy mahagaga ho an'ireo izay manaraka akaiky. Amin'ity lafiny ity, ny fanafoanana ny malemy nolalovantsika omaly dia raisina ho voka-pifidianana efa zahana mialoha. Lohahevitra: TCDD 3 Tender ho an'ny Tetikasa Haingam-pandeha matevina ao Bursa-Osmaneli amin'ny April 2018 [More ...]
Ny filohan'ny faritany CHP Karabük Abdullah Cakir, Institut Technologies dia tokony hapetraka any Karabuk, hoy izy. Cakir-paritany Providence, Institute Rail Technologies Institute nilaza fa ny tanàna koa dia hita ihany. Karabük, Torkia ny vy sy ny vy mitaky ny fahamendrehan'ny velona nandritra ny taona maro, izao tontolo izao [More ...]
Vavam-bolan'ny Kayseri Metropolitan Munisipaly ho an'ny fanofana ny toerana fanaovana dokam-barotra amin'ny tsangambato amam-polon-trano sy turnstiles ary fiara fitaterana sy fiara fitaterana amin'ny làlan-dalamby lalamby ho an'ny taona 6. Kayseri Metropolitan Munisipaly amin'ny alàlan'ny lalànan'ny rafitry ny lalamby ary [More ...]
Artova, Bekdiğin, Suluova, Turhal sy Yeşilyurt Fonjan-tabilao Karazana fanondranana entana momba ny lalamby mifandraika amin'ny rindrambaiko sy vaovao hafaRayHaber Bulletin Tender 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Ao anatinay rafitra, misy andro 25.01.2019 [More ...]
Ben'ny tanàna ao Düzce, izay nanomana tetikasa ho an'ny làlana Istanbul. Faruk Özlü, nanosika ny bokotra ho an'ny fampiharana ny tetik'asa vaovao. Ny tetik'asa telo andalana vaovao eny an-dalana dia hanala ny lalamby. Noho izany [More ...]
Kayseri Metropolitan Munisipaly dia manohy mampiditra ny soatoavina ara-tantara sy natoraly an'i Kayseri, indrindra fa ny Erciyes Winter Tourism Center. Ben'ny tanànan'ny kaominina Metropolitan Nihaona tamin'ny mpizahatany Okrainiana tao Erciyes i Memduh Büyükkılıç. Miaraka amin'ny asan'ny Kaominin'i Metropolitan, fizahan-tany Okrainiana [More ...]
7 nokarakaraina tao amin'ny Konya Science Center izay misy ny lohahevitry ny hoe "Ahoana ny, Ahoana ny fomba fiasa yıl. Konya Science Festival dia notsidihin'ny olona dimampolo sy zato. Konya Metropolitan Monisipaly nirahin'i TUBITAK voalohany nanohana Torkia siansa foibe in Konya Science [More ...]
Fangatahana IMBB Fampandrosoana ny Fizahan-tany '. Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) dia nanomboka tetikasa vaovao mba hampitomboana ny isan'ireo mpizahatany tonga any an-tanàna sy hanampy ireo mpitsidika vahiny. Indrindra ao amin'ny saikinosy ara-tantara izay ahatongavan'ireo mpizahatany vahiny [More ...]